Igbo, Romans, Lesson 023 -- The Revelation of the Righteousness of God in the Atoning Death of Christ (Romans 3:21-26) | Waters of Life
Home -- Igbo -- Romans - 023 (The Revelation of the Righteousness of God)
NDI ROM 3:21-24
21 Ma ub nowu a ekpughere ezi omume nke Chineke nke n fromdebeghi iwu, ebe iwu ahu na ndi-amuma nāb witnesseda ya àmà, 22 ezi omume Chineke, site n'okwukwe ekwere na Jisus Kraist, nye ndi nile kwere. N'ihi na ọdịiche adịghị; 23 n’ihi na mmadụ niile emehiewo, ha adịghị erukwa otuto Chineke, 24 n’onyinye amara n’onye amara n’onye ezi omume site na ntughari nke dị n’ime Kraịst Jizọs
Unu bụ onye mmehie? A na-aza ajụjụ a naanị ndị mmehie tara ahụhụ site n'ihe omume ha gara aga, n'ihi na ha chọpụtara na ọbara ha dị njọ, na omume ha adịghị mma.Bịa, gee ntị Ozi Ọma ahụ na-agwa gị okwu n’ikpe nke ụwa nke ụwa.
Pol mere ka ndi mmadu nile mara, ndi oma na ndi mmehie, ndi ahuru na ndi furu efu, ndi nwere ndu di nkpa, ndi okenye na ndi umuaka, n’aha nke iwu na nke iwu Chineke, na ha bu ndi mmehie nwere uche ojoo.
Ngọzi na-adịrị unu bụ ndị maara na unu ezughị oke n’ebube Chineke, dịka mmadụ niile dị. Anyị enwekwaghị oyiyi nke Chineke enyere anyị n’okike. Na-akwa ákwá n'ihi nrụrụ aka gị?
Gịnị bụ azịza Chukwu maka ebubo nke iwu nsọ ya megide anyị? Kedu ihe bụ ikpe Chineke megide oke nke ndị na-emebi iwu ọjọọ? Gịnị bụ mkpebi ikpe ezi omume ya na mụ na gị?
Okwu di egwu dara ada n’eluigwe na n’elu uwa n’ime juu na egwu nke uwa na ndi nwuru anwu. Uche anyị gbagoro wee kwuo, sị: “Nke a agaghị ekwe omume!” Ekwensu wee tie mkpu, sị: “Ee e!” Ma mmụọ nke Chineke na - akasi gị obi, ma tụọ aka n'Ọdụ nke Chineke e gburu egbu, onye wepụrụ mmehie nke ụwa. Chineke tara Ọkpara ya ahụhụ kama ndị mmehie niile. Chineke dị nsọ bibiri Ọkpara ya dị nsọ, iji doo ndị rụrụ arụ nsọ. Kraist dobere ụgwọ nke ime mmụọ gi site na ahuhu nke anu aru ya ka inwere ike ibanye na nzipu nke Chineke. Inwereonwe gị, agbapụtala ma tọhapụ gị. Mmehie ma ọ bụ nke Setan, ma ọ bụ ọnwụ enweghị ike n’ebe ị nọ. Are bụ onye aka ya dị ọcha, Chineke na-anabata gị ruo mgbe ebighị ebi.
Ikwenyere nke a, ma ị jiri ntụkwasị obi nakwere ozi nke nzọpụta? Ọ bụrụ n’ile anya na enyo, ị ga - ahụ onwe gị dịka ọ dị n’ihu, mana ị ga - achọpụta ihe ọhụrụ. Ga - ahụ ihe iriba ama nke ọ gratitudeụ na ọ joyụ na - enwu enwu n'anya gị, n'ihi na Chukwu hụrụ gị n'anya, ọ we gua gị n'onye ezi omume site na ọnwụ nke Ọkpara ọ mụrụ naanị. Either ma nakwere eziokwu a, ma ọ bụ jụ ya. Ezuwo oke nke ụwa dum, ekwesighi ka Kraịst nwụọ ọzọ n'obe. Onye nke kwere bu onye a zoputara, ma onye no n’onye nzoputa a gaghi ikpe ikpe. Okwukwe gi azoputala gi.
Kpukpru owo ẹkedi ndibiere ikpe, ẹbiom ikpe n̄kpa ye nsobo, edi Abasi ama enen kpukpru mmọ, ọnọde mmọ ifet ndidu uwem ke nsinsi. Achọpụtaghị ugwu a n’okpukpe niile nke ụwa. Ọ bụ naanị na Oziọma. Ima Abasi akanyan̄a kpukpru owo; ndị ọka iwu na ndị furu efu, ndị a ma ama na ndị ekweghị ekwe, ndị ọkà ihe ọmụma na ndị dị mfe, ndị agadi na ụmụaka. Chineke aguwo ha nile n’onye ezi omume. Rùe ole mb wille ka unu gan keepdepu obi-ebere nke amara-ya? Bịanụ, kpọọ ndị enyi gị ma gwa ha na ọnụ ụzọ ụlọ mkpọrọ ha emeghewo, na ha nwere ikike ịbụ onye a tọhapụrụ dịka Ozizi. Mee ọsọ ọsọ, gosi ha nnwere onwe ọhụrụ nke Chineke.
Nwanne m, ị nabatala Kraịst na nzọpụta ya? Know matara ya dịka Onye Nzọpụta gị nwere obi ebere? Mgbe ahụ, ka m kelee gị ma tụọ aro ka ị kelee Jizọs maka nhụjuanya na ọnwụ ya, n'ihi na ọ bụ naanị ya zọpụtara, mee ka ị dị ọcha ma zie ezi. Yabụ, jiri okwukwe gị sọpụrụ ya, ma kelee ya n’akwụsịghị akwụsị. Mee ka ndu gi ju afọ jupụta n’ekele maka amara ya dị ebube.
EKPERE: Onye nwe anyi Jesu Kristi anyi huru n’anya, anyi n’ekele gi ma huru gi n’anya n’ihi na ino anwu n’ihi anyi n’obe. Nna di obi ebere, anyi n’efe gi n’ihi na you gbagharala mmehie anyi niile site n’onye igbaghara mmehie nke Jisos. O Mmuo Nso, anyi n’ekele gi n’ihi na I nyela anyi amara nke n’inweghi ihe omimi, me ka anyi guzosie ike n’onye ezi omume, ma mekwaara anyi amara ngbaghara. Anyi n’enye gi otuto O Nsọ di nkpa, n’ihi na I nyere ndu anyi uru. Kụziere anyị ka anyị kelee gị ruo mgbe ebighi ebi, ma doo kwa ndụ anyị nsọ ka omume anyị wee gosipụta ikele ekele maka nnukwu amara gị.
Kedu ihe bụ ebumnuche kachasị na nkwuputa anyị site n'okwukwe?
Page last modified on January 26, 2021, at 06:42 AM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)